ကောင်းကင်ဖြူ: September 2013
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ …။ ဒီနေ့ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ လေး ဖြစ်တာမို့စိတ်ထဲတွေးမိတာလေးကို ချရေးမိပါတယ် ။
ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဆိုလို့ google မှာ Day of Peace ဆိုပြီး ရှာကြည့်မိပါတယ် ။ ဌက်တွေ လွတ်နေကြတာပဲ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။ UN ဆိုက်တစ်ခုထဲမှာတော့ International Day of Peace ကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ သတ်မှတ်ခဲ့ ပြီး ၊ ပထမဦးဆုံး အခမ်းနားကို ၁၉၈၂ စက်တင်ဘာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ် ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာတော့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ကို International Day of Peace လို့တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ် ။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားရပ်ဟာ ကျနော် တို့လူသားတွေနဲ့အတော်ကို ရင်းနှီးပြီးသား စကားပါ ။ လူသားတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို လိုချင်ကြသလို ၊ မငြိမ်းချမ်းအောင်းလည်း ကျနော် တို့လူသားတွေက ပဲ ဖန်တီးကြသည် မဟုတ်ပါလော …။ အဓိက တရားခံကတော့ ကျနော်တို့လူသားများ ဖန်တီးတဲ့ စစ်ပွဲများ ဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး ။ လူသားနှင့် စစ်ပွဲဆိုတာ လည်း လူ့ သမိုင်းအစဉ်ဆက် ဖွားဘက်တော်လို့ပြောလို့ ရတဲ့ အခြေအနေပါ ။
လက်တွေ့ဘဝ များအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ပုံပြင်ထဲက နတ်သမီးလေး တပါးလိုပါပဲ ။ ရာဇဝင်ထဲက ၁၁ ရာစုမှ ၁၇ ရာစုထိ နှစ်ပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း 23,500,000 ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ခရှုးဆိတ်စစ်ပွဲကြီးများ ၊ ကမ္ဘာစစ်ပွဲ ကြီးတွေနဲ့စစ်အေးလွန်ကာလများမှာ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ၊ အစွန်းရောက် ဝါဒ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ၊ အာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ပုံပြင် တစ်ပုဒ်လို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။အမှန်တကယ်ဆိုရင် လူ့ သမိုင်းအစဉ်ဆက် မှာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲများဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အတွက် လုံလောက်တဲ့ သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို လုံလောက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ရှိပင်မဲ့ ၊ စစ်ပွဲဆိုတာကို ကျနော် တို့ တွေ မမြင်ချင် မကြားချင်လည်း ယနေ့ ထက်တိုင်မြင်နေရဆဲပါပဲ ။
ကျနော်တို့လူသားများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ နာတာရှည် ရောဂါကြီး တစ်ခုလိုပါပဲ ။ ချက်ချင်းကြီး ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလို့မရပင်မဲ့ ၊ ဒီ ရောဂါကို ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာပြီး စိတ်ရှည်ရှည် ထား ကုသမယ်ဆိုရင် လူနာဟာ လုံးဝအကောင်း ပြန်မဖြစ်ရင်တောင် ထိုက်သင့်တဲ့ ရှင်သန်ခွင့်ရမှာသေချာပါတယ် ။
ကျနော် တို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လည်း ဒီလိုပါပဲ ။ အတိတ်က သမိုင်းတွေ ၊ သင်ခန်းစာတွေ ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲက နတ်သမီးလေး တပါးလို ဖြစ်နေပင်မဲ့ ကျနော်တို့အားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးကို တန်ဖိုးထားပြီး ၊ စစ်ပွဲတွေ ကို ဆန့်ကျင်မယ် ဆိုရင် ကျနော် တို့လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာဟာ ကျနော် တို့ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းစာလောက် အကွာမှာ ရှိနေပါတယ် ။ ကျနော် တို့ရင်ထဲက အမုန်းတရားတွေကို အတိတ်က သင်ခန်းစာတွေ နဲ့ခြေဖျက်လိုက်ပြီး အားလုံးသော(အားလုံးသော)လူသားများ တွဲလက်များဖြင့် လှမ်းယူကြမယ် ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆို တာ ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာထာဝရ ရှင်သန်နေကြမှာပါ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ။ အတိတ်သမိုင်း တွေ ၊ အစွန်းရောက် ဝါဒ နဲ့အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှု တွေ ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ မှောင်ထုကြီးထဲကနေပဲ ကျနော် တို့ရင်ထဲက ငြိမ်းချမ်းရေး အလင်းစက်တွေ စုစည်းကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး အလင်းရောင်တွေ ထွန်းလင်းတောက်ပလားမှာသေချာပါတယ် …….. ။ ကိုယ်စီရှိနေတဲ့ ရင်ထဲက အလင်းစက်မျာ ……. စုစည်းကြပါစို့….. ။
ယနေ့ကျရောက်သော ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုလျှက် ……….
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:06 AM3comments